कुन कुन खानेकुरा फेरि तताएर खानु हुदैन ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
स्कुल, कलेज वा अफिस जानेहरुका लागि एउटै खाना पटक पटक तताएर खानु सहज मात्रै होइन कि बाध्यता पनि हुन्छ । अझ शहर तिर एक्लै बस्नेहरुले एक पटकमा एक छाक वा त्यो भन्दा बढिका लागि खाना तयार गर्ने चलन बढ्दो छ । समय हुँदा एकै पल्ट एक छाक भन्दा बढि पकाउँने र पछि त्यसलाई तताएर खाने चलन विदेशमा र हाम्रै देशमा पनि बढ्दो छ ।
धेरैलाई यस्तो लाग्छ कि फ्रिजमा राखेका पकाएका खानाहरु निकै दिनसम्म ताजा रहन्छन् र यसलाई जुन सुकै समयमा तताएर खाएमा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्दैन । केहि हदसम्म यो कुरा साँचो पनि हो कि फ्रिजले खानालाई धेरै समय सम्म ताजा नै बनाउँछ । तर सबै खानेकुराहरुमा यो नियम लागू नहुन सक्छ ।
यहाँ हामी तपाईलाई त्यस्तै केहि खानेकुराहरुका बारेमा जानकारी दिदैछौ, जसलाई फेरि तताएर खानु हुदैन । पाकिसकेको खानालाई फेरि तताएर खाँदा त्यसको पौष्टिकता नष्ट हुने मात्रै होइन कि स्वास्थ्यमा पनि खराब असर पार्न सक्छ । यसैले कुन खानेकुरा फेरि तताएर खानु हुदैन भन्ने जानकारी लिइराख्दा फाइदा हुन्छ ।
मसरुम लामो समय चिसोमा राखेको खाँदै नखाँदा राम्रो हुन्छ । यो धेरै संवेदनशिल तरकारी हो । यसमा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ । जुन चिसो भइसकेर फेरि तताउँदा बिग्रिने डर असाध्यै धेरै हुन्छ ।
कुखुराको मासु (चिकेन)
मान्छेहरु कुखुराको मासु फेरि तताएर खान खुब रुचाउँछन् । अझ विदेश तिर रहेका नेपालीहरुमा त कुखुराको मासु तताउँदै खाने चलन निकै प्रचलित छ तर यसमा प्रोटिनको मात्रा धेरै हुने भएकाले चिसोबाट फेरि तातो बनाउँदा प्रोटिन टक्सिस नामक तत्वमा बदलिन सक्छ । यो तत्व स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
आलु स्वास्थ्यका लागि असाध्यै राम्रो मानिन्छ । तर, यसलाई पकाएर लामो समय फ्रिजमा राखेर फेरि तताउँदा भने हानिकारक हुन सक्छ किनभने यसमा रहेको पोषक तत्व विषाक्त तत्वका रुपमा बदलिन सक्छ ।
पालकमा नाइट्रेट नामक तत्व हुन्छ । जुन तताउँदा विषाक्त तत्वका रुपमा बदलिन सक्छ ।
यसमा नाइट्रेटको मात्रै धेरै हुन्छ । जुन शरीरका लागि राम्रो मानिन्छ । तर यसलाई फेरि तताउँदा यो हानिकारक तत्वमा बदलिने सम्भावना हुन्छ ।
अण्डालाई धेरै तापक्रममा ततायो भने विषालु पदार्थ भइदिन सक्छ । त्यसैले एकपल्ट गरम पानीमा उमालेको अण्डालाई फेरि तातोपानीमा उमालेर तताउनु हुँदैन । यसरी खाँदा पेट बिग्रिने सम्भावना अधिक रहन्छ ।
तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? कृपया जानकारीहरु सेयर गर्नुहोला । आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोला ।
Topics #तताएर खानु हुदैन
Don't Miss it यसकारण मान्छे चन्द्रमामा पुगेका छैनन् |
Up Next जाडोमा ध्यान दिनुपर्ने घरेलु तरिका